Saraakiil sare oo musuq-maasuq loo xiray | KEYDMEDIA ONLINE
Saraakiil sare oo musuq-maasuq loo xiray
Saraakiishan ayaa ka kala tirsan Maamulka Muuse Biixi Biixi iyo dowladaha Hoose, kuwaasoo tiradoodu gaarayso illaa 15, sida uu sheegay Hanti Dhowraha guud ee Somaliland
HARGEYSA, Somaliland - Saraakiisha Somaliland waxay xireen 15 qof oo lagu eedeeyay musuqmaasuq labadii bilood ee la soo dhaafay, ilo wareedyo ayaa u sheegay VOA Somali.
Shakhsiyaadka oo ah shaqaalaha dawladaha hoose iyo kuwa katirsan Wasaaradaha dawladda ayaa lagu eedeeyay inay lunsadeen hanti dadweyne 1 milyan oo doolar, sida ay sheegeen ilo wareedyo.
Waxay isagu jiraan xisaabiyaal, isu-duwiyaal gobol iyo Saraakiil kale oo ka howlgalayay dhowr Wasaaradood, sida uu sheegay Habti Dhowraha Guud ee Somaliland Axmed Yuusug Dirir, oo la hadlay VOA Somali.
Eedeysaniyaasha ayaa laga soo xiray Burco, Boorame iyo Berberam, waxaana la dhigay xabsiga, iyagoo lasoo taagi doono dhawaan maxkamada, iyadoo kiisaskooda ay yihiin kuwa aan ku cusbayn Somaliland, oo la degay madaxdeeda musuq-maasuq.
Wasiiro iyo agaasimiyaal guud ayaa musuq-maasuq lagu helay labadii sano ee lasoo dhaafay, kuwaasoo qaarkood xilalka laga qaadey, kuwana xukuno xabsi iyo ganaaxyo lagu riday.
Somaaliya ayaa sandka walba safka hore ka gasha dalalka ugu musuq-maasuqa badan Caalmka, sababo la xiriira hay'addo dowladeed oo awood leh oo dalka ka jirin, sida lagu sheegay warbixintii ugu dambeysay ee Transparacency International